Home Wararka Deni oo Boosaaso u tagaya xalinta khilaafka PSF
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa waxaa la filayaa in todobaadka soo socda uu safar deg deg ah ku tago Magaalada Boosaaso ee Xarunta Gobolka Bari, si xal looga gaaro arrinta gacan ka hadalka dhalisay ee Taliska Hay’adda PSF.
Magaalada Boosaaso ayuu Madaxweyne Deni kula kulmi doonaa Isi.ada Gobolka Bari kadib wada-hadallo Khadka taleefoonka ah oo dhexmaray Boqor Burhaan Boqor Muuse iyo Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni..
Sidoo kale Madaxweynaha Puntland ayaa la filayaa markii uu tago Boosaaso in uu la kulmo Saraakiisha kala duwan ee Ciifamada, isaga oo kala hadli doona dardar gelinta Amniga Magaalada maadaama ay kamid tahay Goobaha lavu qabanayo doorashada Golaha Shacabka.
Isimada Puntland ee uu hoggaaminayo Boqor Burhaan ayaa horay u soo saaray go’aanno ku saabsan xallinta khilaafkii ka dhashay Hay’adda PSF, go’aannadaas oo ay laba qeyb ku kala noqdeen Siyaasiyiin waday wada-hadallo lagu dhex dhexaadinayay Madaxweynaha Puntland & Saraakiisha Taliska Hay’adda PSF.
Magaalada Boosaaso ee Xarunta Gobolka Bari ayaa waxaa ka dhacay dagaal dhexmaray Ciidamada ka amar qaata Madaxweynaha Puntland iyo kuwa PSF oo uu hoggaaminayo Janeraal Maxamuud Diyaano.
Previous articleDoorashada 5 kamid ah kuraasta Golaha Shacabka oo lagu qabtay Baydhabo
Next articleIsrael oo taageero amni iyo mid sirdoon siinaysa Imaaraadka
Dagaal beeleedka ka socda degmada Wanla-weyn oo dad lagu xasuuqay